सुमार्गीलाई ‘कारबाही’ गर्न कान्तिपुरको लबिइङ – Media Kurakani
January 16th, 2018 Media Kurakani Investigation, Media News
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले उद्योगपति अजेयराज सुमार्गीलाई कारबाही गर्न लबिइङ गरेको छ। सुमार्गीलाई ‘जोगाउन’ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमाथि ‘राजनीतिक शक्ति विशेषको तीब्र दवाव’ रहेको दावी कान्तिपुरले गरेको छ।
कान्तिपुरले मिडिया दुरुपयोग गरी ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लगाउँदै आफूबारे छापिएका समाचारको सुमार्गीले खण्डन गरेपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले प्रत्युत्तरमा मंगलबार वक्तव्य (समाचार/सम्पादकीय/प्रकाशकीय होइन) निकालेको हो।
सुमार्गीलाई उच्च राजनीतिक शक्तिबाट संरक्षण भइरहेको दावी गर्दै कान्तिपुरले उक्त शक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। ‘सुमार्गीलाई संरक्षण दिइरहने शक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘उच्च राजनीतिक शक्ति’ को हो कान्तिपुरले खुलाएको छैन। सुमार्गीबारेका कतिपय समाचारहरूमा कान्तिपुरले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जोड्ने गरेको थियो।
कान्तिपुरले पुस १४ गते ‘प्रकाशित समाचारमा ‘सुमार्गी पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको’ जिकिर गरिएको थियो।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपकै नाममा मंगलबार निकालिएको वक्तव्यमा आफ्ना समाचारको बचाउ गर्दै सुमार्गीबारे तीनवटा आधारमा खोजबिन गरिरहेको उल्लेख छ।
क) केही वर्षअघि सामान्य आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले एउटा राजनीतिक समूह विशेषसँगको सान्निध्यमा अस्वाभाविकरूपमा फैलाएको आर्थिक साम्राज्य, जसको स्रोत खुलेको छैन।
ख) जसको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘शंकास्पद’ ठहर गर्दै तीन वर्षदेखि दुइटा बैंकहरूमै ‘सिल’ गरिदिएको छ। सुमार्गीले त्यसअघि ल्याएको करिब साढे ८ अर्बलाई पनि राष्ट्र बैंकले शंकास्पद मान्दै ती सबै रकमको स्रोत छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाएको छ।
ग) शुद्धीकरण विभागले प्रहरीको सीआईबीसित मिलेर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उनको रकमलाई ‘अवैध’ ठहर गरिएको छ। र, हाम्रो समाचार मूलत: त्यही प्रतिवेदनमा आधारित हो।
सुमार्गीले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गोप्य अनुसन्धान प्रतिवेदनको हवाला दिँदै कान्तिपुरले प्रकाशन प्रसारण गरेको समाचारप्रति आफूलाई शंका रहेको सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। उनले आफूले ल्याउन लागेको प्रत्यक्ष वैदेशिक ऋण लगानी अवैध नरहेको दावी गर्दै आएका छन्।
सुमार्गी किन बने समाचार?
कान्तिपुर मिडिया ग्रुप भन्छ-
राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र साँठगाँठमा आर्थिक अनियमितताको पिरामिड खडा गर्ने बिचौलियाहरूको बिगबिगीबारे हामीले शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङहरू छापिरहेका छौं। शंकास्पद आर्थिक कारोबारमा मुछिएका अजेयराज सुमार्गी पनि त्यही सिलसिलामा समाचारको विषय बनेका हुन्।
के छ कान्तिपुरको वक्तव्यमा?
कान्तिपुरको भनाई छ कि सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकिनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता हो।
देशभित्रबाट अनियमितता–सिर्जित कालो धन विदेश पुर्‍याउने, त्यसलाई ‘सेल कम्पनी’ मार्फत ‘विदेशी लगानी’ भन्दै ल्याउने र यहाँ ‘सेतो धन’ बनाएर फेरि विदेशतिरै फर्काउने ‘मनी लन्डरिङ’ को जुन सिलसिला चलिरहेको छ, त्यो रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
स्रोत खुलाउन सुमार्गीलाई चुनौती
सरकारी निकायहरूले ‘अवैध’ ठहर गरेको कारोबार एवम् रकम ‘वैध’ रहेको ठहर गर्ने र त्यसको कानुनी स्रोत खुलाउने जिम्मेवारी अब सुमार्गीको हो। उनले त्यसो गर्नुको साटो आफ्नो अवैध आर्थिक कारोबारबारे समाचार लेख्ने सञ्चारगृहविरुद्ध गरेको विषबमनको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं। उनले मुख्य मुद्दाबाट ध्यान मोड्न कान्तिपुरविरुद्ध सोमबार जे–जस्ता गम्भीर आक्षेप लगाएका छन्, ती सबैलाई एक–एक गर्दै पुष्टि गर्न हामी चुनौती दिन्छौं। अन्यथा समाचार प्रकाशन गरेकै कारण कहिले ज्यान मार्न खोजेको उजुरी दिने र कहिले कपोलकल्पित आरोपहरू लगाएर चरित्रहत्या गर्न खोज्ने सुमार्गी–प्रवृत्ति सजायको भागिदार हुनैपर्छ।
सुमार्गीको दावी छ कि २०७० सालमा आफूले सिरोहियासँग जग्गा किनेपछि असन्तुष्ट बनेका सिरोहियाले जग्गा फिर्ता नपाएको झोंकमा आफूसँग रिस साँधे। तर कान्तिपुरले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
जहाँसम्म उनले कैलाश सिरोहिया र रामेश्वर थापासमेतको नाममा रहेको काठमाडौं, तीनकुनेको जग्गा किनेको सन्दर्भ छ, त्यसबारे पनि हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौं। उक्त जग्गा आफूलाई आवश्यक नरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले बिक्री गर्ने निर्णय लिएपछि एउटा वाणिज्य बैंकका सीईओको सहजीकरणमा खोजिएका खरिदकर्ता (सुमार्गी) लाई त्यो बेचिएको थियो।
‘धम्क्याएको भन्नु निराधार’
जग्गा कारोबारको विषयमा धम्क्याएको भन्नु निराधार रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सुमार्गीसँग उक्त जग्गाको कारोबार त्यसै बेला अन्त्य भइसकेको सन्दर्भमा, झन्डै चार वर्षपछि अहिले आएर अतिशयोक्तिपूर्ण तानाबाना बुनेर बदनाम गर्न खोज्नुको कुनै तुक छैन। निज सुमार्गीसँग त्यो जग्गाको एउटा कारोबारबाहेक कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाको कहिल्यै कुनै आर्थिक कारोबार भएको/गरिएको छैन। भूकम्पले हाम्रो भवन भत्किएका बेला निज आफैं हाम्रो तीनकुने कार्यालय परिसरमा एकपटक आएयता करिब अढाई वर्षको अवधिमा कहीं–कतै सम्पर्क, भेटघाटसमेत भएको छैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा निजसँग सम्पर्कमा रहेको या धम्क्याएको जस्ता सम्पूर्ण आरोपहरू बिल्कुलै निराधार हुन्।
सुमार्गीलाई ‘सामान्य आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति’ भन्दै उनले ‘एउटा राजनीतिक समूह विशेषसँगको सान्निध्यमा अस्वाभाविकरूपमा आर्थिक साम्राज्य फैलाएको र त्यसको स्रोत नखुलेको’ कान्तिपुरको दावी छ। कारबाही अघि नबढाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई राजनीतिक शक्ति विशेषको दवाव रहेको कान्तिपुरको दावी छ।
जहाँसम्म समाचारको कुरा छ, सरकारी निकायहरूले सुमार्गीको अर्बौं रकमलाई ‘अवैध’ ठहर गरेको र त्यसको स्रोत शंकास्पद रहेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको सन्दर्भमा निजमाथि कारबाही नहुनु कानुनी राजको ठाडो उल्लंघन हो। उनीमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमाथि राजनीतिक शक्तिविशेषको तीव्र दबाब रहेको देखिन्छ, त्यो अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ। सुमार्गीलाई संरक्षण दिइरहने शक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गी प्रकृतिका मुद्दा टुंग्याउन नसके मुलुक नै कालोसूचीमा पर्ने र (राष्ट्रिय) अर्थतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने खतरा’ रहेको दावी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गरेको छ।
‘मुलुक कालोसूचीमा पर्दा नेपाली बैंकहरूले खोलेको प्रतीतपत्र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले स्वीकार नगर्ने हुँदा बाह्य व्यापारमा समेत जटिलता आउनेछ’, कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘धेरैजसो दातृ निकायले कालोसूचीमा परेका मुलुकलाई सहायतासमेत रोक्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने खतरा भएकाले यस्ता जघन्य फौजदारी प्रकृतिका क्रियाकलापको समाचार हामीले निरन्तर लेखिरहेका हौं।‘
Tags Ajeya Raj Sumargi Kailash Sirohiya Kantipur Media Group Nepal Rastra Bank Pushpa Kamal Dahal
‘कान्तिपुरको ब्ल्याकमेल : पत्रकारिता जगतको कालो धब्बा’ »
« कान्तिपुरको सुमार्गी मोह : ओलीलाई तेस्रो पेज, पम्फालाई पहिलो ?
[…] कान्तिपुरले वक्तव्य निकालेर गर्‍यो स… […]